Iimpawu zeXiaomi Mi 9 eziqinisekiswe ngumenzi | I-Androidsis
Kuthekani Xiaomi kuyaphambana. Sikuqhelile ukufumana ulwazi malunga nokukhutshwa okuzayo ngamahemuhemu kunye nokuvuza, kodwa inkampani yaseAsia iya ngokuchasene neenkozo. Ukuqala, uphawu aluthandabuzi Qinisekisa umhla wokubonisa uMi 9 bonisa icala lakho langasemva. Emva kwexesha kwinkomfa umphathi weXiaomi uqinisekisa inxenye yefayile ye- Iimpawu zeXiaomi Mi 9. Kwaye ngoku sinokuqinisekisa ixabiso lakho.
Ewe iyinkampani ngokwayo eye yahluza ezinye Iimpawu zeXiaomi Mi 9, ukongeza ekuboniseni ixabiso leemodeli ezimbini eziza kufikelela kwintengiso kwaye, njengesiqhelo, ziya kuba nexabiso eliphakathi. Inxalenye yayo yangaphambili? Ifemi ipapashe umfanekiso owenza kucace ukuba iMi 9 iya kuba nomfundi ofaka iminwe odityaniswe kwiscreen, kunye neezels ezincinci zokubonelela ngemodeli engenasiphene yoyilo olunomtsalane.
Iinkcukacha ezithe kratya zeXiaomi Mi 9: amanqaku kunye nexabiso
Ukuqala, kwaye njengoko ubona kwimifanekiso ehamba nale migca, iXiaomi Mi 9 iya kuba neprosesa Qualcomm Snapdragon 855, isacholo sangoku kwisithsaba somenzi odumileyo weeprosesa, ukongeza kwi-12 GB ye-RAM, i-NFC chip yokwenza iintlawulo eziphathwayo, inkqubo yokuvula iminwe kunye nokwaziwa kobuso, ukongeza kwiAptX kunye neAptX HD yeaudiyo yokubonelela ngomgangatho onomona isandi.
Kwimeko yomfanekiso wesibini, sinokubona ikhamera kathathu yemodeli ukongeza kwi I-4.800 mAh ibhetri, ukubonelela ngokuzimela okumangalisayo ngokwenyani kunye nento esinika ukuqonda ukuba kwimizuzu nje esi-8 ukuya kuthi ga kwipesenti ezingama-40 zesixhobo sinokuhlawuliswa. Okokugqibela sinenkqubo yekhamera kathathu eneelensi eziphambili ze-megapixel ezingama-48 ezixhaswe zezinye izivamvo ezimbini.
Kwaye ixabiso layo? siza kuba neenguqulelo ezimbini eziya kuxabisa i-3.499 yuan, malunga 460 euro ukutshintsha, kunye nemodeli yesibini enexabiso le-5999 yuan, malunga ne-790 euro yokutshintsha. Gcina ukhumbula ukuba kulindelwe iinguqulelo ezahlukeneyo zesiphelo, ke sinokulindela ukuba iimpawu zeXiaomi Mi 9 ziya kwenza ukuba ixabiso lalo lenyuke okanye lehle ngokuxhomekeke kwizibonelelo ezinazo.
Okokugqibela, kuthungelwano oludumileyo lwe-Weibo, sikwazile ukubona umfanekiso wokuqala wokwenene osibonisa uyilo lwangaphambili lweXiaomi Mi 9. Kule meko, unokuqinisekisa ukuba isixhobo siya kuba nomfundi ofaka iminwe odityaniswe kwiscreen. , mhlawumbi nge Itekhnoloji enamandla ababonisa kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, Ukongeza ngaphambili kunye nezakhelo ezincinci.
Ngoku, kufuneka silinde umboniso osemthethweni wesixhobo ukuze sibone ukuba umenzi waseAsia usothusa ngantoni, nangona sithathela ingqalelo ukuba sele siyazi uyilo, ixabiso kunye neempawu zeXiaomi Mi 9, kuncinci okushiyekileyo ukufundisa ...
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Xiaomi » Ukuqinisekisa uyilo, ixabiso kunye neempawu zeXiaomi Mi 9
Ezi iya kuba zizincedisi eziza kufika nge-Samsung Galaxy S10